के स्टेरोइडको एक चक्रले तपाईलाई चोट पुर्याउँछ - BikeHike
तपाईंको पहिलो स्टेरोइड चक्र कति लामो हुनुपर्छ?
स्टेरोइडहरू सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ?
स्टेरोइड चक्रबाट निको हुन कति समय लाग्छ?
मांसपेशिहरु को निर्माण को लागी सबैभन्दा सुरक्षित स्टेरॉयड के हो?
शुरुआतीहरूको लागि उत्तम स्टेरोइड कुन हो?
के तपाई सधैंभरि स्टेरोइडमा रहन सक्नुहुन्छ?
क्रिएटिन स्टेरोइड जत्तिकै राम्रो छ?
सबै भन्दा राम्रो स्टेरोइड चक्र के हो?
के एचसीजीले अण्डकोषको आकार बढाउन सक्छ?
के मेरो टेस्टोस्टेरोन फिर्ता आउनेछ?
स्टेरोइडको सबैभन्दा नजिकको कानुनी कुरा के हो?
तपाइँ तपाइँको पहिलो स्टेरोइड चक्र कसरी लिनुहुन्छ?
तपाईंले टेस्टोस्टेरोन कति लामो समयसम्म साइकल गर्नुपर्छ?
टेस्टोस्टेरोन एनन्थेट किक हुन कति समय लाग्छ?
के स्टेरोइडहरूले तपाईंलाई छिटो उमेर बनाउँछ?
तपाईं कति समयसम्म स्टेरोइडहरू सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
कति स्टेरोइड सुरक्षित छ?
किन क्रिएटिन तपाईंको लागि खराब छ?
के क्रिएटिन १६ वर्षका बालबालिकाका लागि सुरक्षित छ?
तपाईं creatine मा Natty हुनुहुन्छ?
सामान्यतया, प्रयोगकर्ताहरूले एक पटकमा छ हप्तादेखि 16 हप्तासम्म स्टेरोइडहरू लिनेछन्, त्यसपछि धेरै हप्ताहरू कम डोजहरू लिने वा कुनै स्टेरोइडहरू छैनन्। एथलीटहरू जसले जान्दछन् कि तिनीहरू परीक्षण गर्न जाँदैछन् - उदाहरणका लागि, एक विशेष घटना वा प्रतिस्पर्धाको समयमा - औषधि परीक्षण पास गर्ने आशामा तिनीहरूको चक्र समय हुनेछ।
के त्यहाँ एनाबोलिक स्टेरोइडहरूको लागि सुरक्षित खुराक छ? एनाबोलिक स्टेरोइडको कुनै 'सुरक्षित' खुराक छैन। यदि तपाइँ स्वास्थ्य चेतावनी र तपाइँको डाक्टरको सल्लाहको बावजुद स्टेरोइडहरू प्रयोग गर्न जारी राख्नुहुन्छ भने, तथापि, खुराकलाई न्यूनतममा राख्नुहोस् र स्टेरोइडहरू प्रयोग गर्नबाट विश्राम लिनुहोस्।
एनाबोलिक स्टेरोइडहरूबाट निकासी लामो समयसम्म एनाबोलिक स्टेरोइडहरूमा रहेपछि प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन स्तरहरू पुनर्स्थापित गर्न4महिना लाग्न सक्छ। स्टेरोइडबाट निकासीका लक्षणहरू समावेश हुन सक्छन्: थकान।
1) Crazy Bulk द्वारा D-Bal त्यसैले यो कुनै अचम्मको कुरा होइन कि D-Bal Crazy Bulk को सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने सप्लिमेन्ट हो। तिनीहरूको उत्पादन सुधार गर्न र तपाईंलाई सुरक्षित र प्रभावकारी तरिकामा मांसपेशीहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्ने कुरा सिर्जना गर्ने तिनीहरूको प्रतिबद्धताले गर्दा हामीलाई लाग्छ कि D-Bal दृढ रूपमा हाम्रो सूचीमा नम्बर-एक स्थानको योग्य छ।
- अनवर (अक्सान्ड्रोलोन) शुरुआतीहरूका लागि सबै स्टेरोइडहरूमध्ये सबैभन्दा सुरक्षित हो, यो टेस्टोस्टेरोन भन्दा धेरै हल्का हुन्छ। अनवरका फाइदाहरू हुन्: यो। एनाबोलिक स्टेरोइडहरूले मांसपेशी मास बढाउन सक्छ, तिनीहरू सम्भावित विकल्प हुन सक्छन्। यद्यपि, अन्य सबै मौखिक स्टेरोइडहरू जस्तै, यो धेरै कलेजो विषाक्त छ।
यदि तपाई राम्रो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले आफ्नै सहमतिमा रोक्नु हुँदैन। यदि तपाईंले केही हप्ताभन्दा बढी समयदेखि स्टेरोइडहरू प्रयोग गरिरहनुभएको छ (वा प्रिडनिसोन 40 मिलीग्राम प्रति दिन वा सोभन्दा बढीको अवस्थामा एक हप्ता) तपाईंले पूर्णतया रोक्नु अघि बिस्तारै खुराक घटाउनुपर्नेछ।
क्रिएटिन र एनाबोलिक स्टेरोइड एउटै कुरा हो झूटो! क्रिएटिनको एनाबोलिक स्टेरोइडसँग कुनै सम्बन्ध छैन, जसले मांसपेशीको वृद्धिलाई बढावा दिन र शारीरिक कार्यसम्पादन बढाउन टेस्टोस्टेरोनसँग मिल्दोजुल्दो वा अनुकरण गर्दछ। क्रिएटिनले तपाईंको मांसपेशीहरूलाई अतिरिक्त ऊर्जा दिन्छ, वा तिनीहरूलाई उत्पादन गर्न मद्दत गर्दछ।
अनवर सम्भवतः वजन घटाने को लागी सबै भन्दा राम्रो स्टेरोइड हो, दुबला बल्किङ को लागी सबै भन्दा राम्रो स्टेरोइड चक्र। Anavar बडीबिल्डरहरू बीच लोकप्रिय छ किनभने यसले मूत्रवर्धकको रूपमा पनि काम गर्दछ त्यसैले तपाईंले पानी पनि गुमाउनुहुन्छ, मांसपेशी लाभको लागि उत्तम स्टेरोइड ट्याब्लेटहरू। तपाईं स्टेजमा हुँदा त्यो कुरकुरा र सुख्खा लुक खोज्नेहरूका लागि, Anavar आदर्श हो।
उनीहरूले रिपोर्ट गरे कि hCG उपचारले वृषणको मात्रा 5.5 (पूर्व उपचार) बाट 10.8 mL (अधिकतम) लाई उपचारको क्रममा बढायो र सबै पुरुषहरूले hCG उपचार पछि सामान्य सीरम टेस्टोस्टेरोन स्तर प्राप्त गरे। एचसीजी उपचारको क्रममा, 14 पुरुषहरू मध्ये 22 जनाको वीर्यमा सकारात्मक शुक्राणु देखा परेको थियो।
कम टेस्टोस्टेरोनको लागि उपचार एक चलिरहेको प्रक्रिया हो र सामान्यतया लामो समय सम्म जारी रहनेछ। अन्य धेरै पुरानो अवस्थाहरू जस्तै, यदि तपाइँ थेरापी रोक्नुहुन्छ भने, समस्या फिर्ता आउँछ - तपाइँको टेस्टोस्टेरोन स्तरहरू तल-सामान्य स्तरहरूमा तल झर्नेछ।
शीर्ष कानुनी स्टेरोइड पूरकहरू: रैंकिंग #1 D-Bal अधिकतम: Dianabol र उत्तम समग्र स्टेरोइड वैकल्पिक। #2 टेस्टो-मैक्स: Sustanon को वैकल्पिक। #3 HyperGH 14X: HGH इंजेक्शनहरूको लागि वैकल्पिक। #4 Clenbuterol: Clenbuterol को वैकल्पिक। #5 Winsol: Winstrol को वैकल्पिक।
एक चक्रको सुरुमा, व्यक्तिले स्ट्याक गरिएको ड्रग्सको कम डोजबाट सुरु हुन्छ र त्यसपछि बिस्तारै खुराकहरू बढाउँछ। चक्रको दोस्रो आधामा, खुराकहरू बिस्तारै शून्यमा घटाइन्छ। यो कहिलेकाहीँ दोस्रो चक्र पछि हुन्छ जसमा व्यक्तिले तालिम जारी राख्छ तर ड्रग्स बिना।
सामान्य परिकल्पना यो छ कि स्वस्थ, वृद्ध पुरुषहरूलाई 52 हप्ता (1 वर्ष) को लागि टेस्टोस्टेरोन प्रशासनको चक्र पछि4हप्ता र टेस्टोस्टेरोन बिना4हप्ता (अर्थात, मासिक चक्रीय आहार) ले मांसपेशी बलमा समान लाभ प्रदान गर्दछ, मांसपेशी मास, र मानक रूपमा हड्डी घनत्व।
टेस्टोस्टेरोन एनन्थेटको प्रयोगले 6-12 हप्ता प्रशासन (2, 9) भित्र बल बढाउन देखाइएको छ, तथापि, यो स्पष्ट छैन कि एर्गोजेनिक फाइदाहरू6हप्ता भन्दा कममा स्पष्ट छन्।
एनाबोलिक स्टेरोइडको दुरुपयोगले किशोरावस्थाको वृद्धिलाई पनि रोक्न सक्छ। स्टेरोइडले हड्डीको समयपूर्व बुढ्यौली हुन सक्छ।
दुई हप्ता भन्दा बढीको लागि स्टेरोइड प्रयोगले तपाईंको शरीरको शारीरिक तनावलाई प्रतिक्रिया गर्ने क्षमता घटाउन सक्छ। स्टेरोइडको उच्च खुराक प्रमुख तनावको समयमा आवश्यक हुन सक्छ, जस्तै शल्यक्रिया वा धेरै व्यापक दन्त काम वा गम्भीर संक्रमण। तपाईंले स्टेरोइडहरू बन्द गरेपछि एक वर्षसम्म यो आवश्यक हुन सक्छ।
प्रति दिन 7.5 मिलीग्राम भन्दा कमलाई सामान्यतया कम खुराक मानिन्छ; दैनिक 40 मिलीग्राम सम्म एक मध्यम खुराक हो; र दैनिक 40-mg भन्दा बढी एक उच्च खुराक हो। कहिलेकाहीँ, स्टेरोइडको धेरै ठूलो खुराक छोटो अवधिको लागि दिइन्छ।
तपाइँ कसलाई सोध्नुहुन्छ भन्ने आधारमा, क्रिएटिनको सुझाव गरिएका साइड इफेक्टहरूमा समावेश हुन सक्छ: मृगौला क्षति। कलेजो क्षति। मिर्गौलाको पत्थरी।
अमेरिकन एकेडेमी अफ पेडियाट्रिक्स र अमेरिकन कलेज अफ स्पोर्ट्स मेडिसिन दुवै किशोरकिशोरीहरूले क्रिएटिन लगायतका कार्यसम्पादन वृद्धि गर्ने सप्लिमेन्टहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा सहमत छन्। यसको बारेमा आफ्नो किशोर एथलीटसँग कुरा गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ प्रोटिन पाउडर, क्रिएटिन, प्रि-वर्कआउट, SARMS, ROIDS, आदि लिनुहुन्छ भने तपाइँ प्राकृतिक/नेटी हुनुहुन्न।
स्टेरोइडको एक चक्रले तपाईंलाई चोट पुर्याउन सक्छ
द्रुत उत्तर: टेस्टोस्टेरोनको एक चक्रले तपाईंलाई चोट पुर्याउँछ
प्रश्न: कसरी स्टेरोइड साइकल गर्ने
स्टेरोइडले मासिक धर्म चक्रलाई असर गर्न सक्छ
स्टेरोइडले मासिक धर्म चक्रलाई परिवर्तन गर्न सक्छ
स्टेरोइडहरूले कसरी मासिक धर्म चक्रलाई असर गर्छ
प्रश्न: कति लामो स्टेरोइड साइकल गर्न
कसरी स्टेरोइडहरू सुरक्षित रूपमा साइकल गर्ने
कति लामो टेस्टोस्टेरोन चक्र
द्रुत उत्तर: टेस्टोस्टेरोन कसरी साइकल गर्ने
स्टेरोइड चक्र कति लामो छ